Dhismaha dawlad casri ah oo ku dhisan saraynta sharciga, xoojisa dhaqanka madaniga ah ee ku dhisan dimoqoraadiyada iyo cadaalad bulsho, adakaysa midnimada Soomaaliyeed islmarkaana baahisa awooda maamul ee dawladda iyadoo la raacayo habka maamul ee Gunkasoo dhiska iyo hannaanka federaalka
U hawlgelida sidii loo heli lahaa bulsho Soomaaliyeed oo ka fiyow qabyaalad kana fog gacan ka hadal iyo xagjirnimo diineed lehna wacyi iyo dareen qaranimo, iskuna xilqaanta gudashadda waajibka qaran iyo masuuliyadda ummadnimo, kuna noolaata nabad, xasilooni, cadalaad iyo karaamad"
U hawlgalka Sugida amniga iyo xasiloonida muwaadinka Soomaaliyeed iyo soo celinta nidaamkii iyo kala danbayntii.
U hawlgalka dhismaha ciidan qaran oo ilaaliya Dastuurka dalka iyo madaxbanaanimada qaranka.
Hirgelinta nidaamka federaalka si waafaqsan Dastuurka KMG ah kuna jirto danta ummada iyo tan dalka. Xoojinta iyo tayaynta gun ka dhisidda maamulladda heer Federaal, Gobol iyo Degmo.
Dib u habaynta nidaamka siyaasiga iyo u howlgalka sidii loo heli lahaa hanaan siyaasadeed oo xisbiyo ku dhisan lehna sharciyad iyo metelaad.
Dhismaha hay'adaha maamulka dawliga ah gaar ahaan kuwa maaliyadda iyo maamulka guud.
Xoojinta dib u heshiisiinta iyo la dagalaanka afkaarta guracan ee xagjirnimada iyo xoog wax ku doonka.
Meelmarinta siyaasad dibaadeed ku dhisan hirgelint danta qaran, u hawlgalka xasiloonida gobolka iyo mushkilad la'aan deriska ah (zero problem with the neighbours).
Fududaynta gargaarka Bani'aadanimo dib u dejinta barakacayaasha iyo maaraynta kaalmooyinka dhaqaale si u adeegaysa danta dadlka iyo dadka.
© Xuquuqda website-kan waxa ay u gaar tahay Xisbiga Wadajir 2016 - 2022